Mila fahaiza-mitantana sy mikajy ny ala honko ny mponina ao Boanamary | Région Boeny
Ho tanterahina ny 19 sy 20 Jona 2015 ho avy izao ao amin’ny kaomina Boanamary distrikan’i Mahajanga II ny hetsika «ala honko misôma ».
Izao hetsika izao dia entina hanatsarana ny fitantanana maharitra ny ala honko ao Boanamary araka ny fanazavana nentin’ny Fikambanana Komanga eto Mahajanga ho fiarovana ny ala honko izay mihasimba sy potika noho ny fitrandrahana mihoa-pampana sy ny tsy fahaizana mitantana.
Ny Fikambanan’ny Vondron’olona Ifotony ao amin’ny kaomina Boanamary no tompon’antoka amin’ny fanatanterahana ny hetsika mba hanetsehana ireo mpisehatra rehetra avy eto an-toerana sy manerana ny Faritra hanandratana ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny ala honko ary hanehoana ireo karazam-bokatra voajanahary miara-miaina ao anatiny.
Mandritra ny hetsika, hisy ny fanomezan-danja ny fifandrasain’ny kolontsaina, ny tantara, ny toe-karena sy ireo harena voajanahary izay mampihavaka ny kaomina Boanamary amin’ny alalan’ny loabary an-dasy, fampiratiana anaty trano heva, fandefasana horonan-tsary ho fanentanana ny fiarovana ny ala-honko, karazan-dalao, fanabeazana ary hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahan-tena.
Antony hanaovana izao hetsika izao hoy ireo mpikarakara izao hetsika izao dia noho ireo mponina miankina amin’ny fitrandrahana ireo vokatra azo avy amin’ny ala honko ka mila fahaizana mitantana sy mikajy azy, ary hampitombo ny asa fampidiram-bola isan-tokatrano ho an’ny mponina eny ifotony ary dingana iray lehibe ihany koa ho amin’ny fiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Izao hetsika izao dia tarihin’Atoa Rovin Rakotondrasoa, Filohan’ny komity mpikarakara ka ny PAGE-GIZ ( Projet de d’appui à la gestion environnementale) no mpitantsoroka ara-tekinika.